Liverpool, Iyo Tottenham Hotspur Oo Ku Loolamaya Mikkel Damsgaard
HomeWararka CiyaarahaLiverpool, iyo Tottenham Hotspur oo ku loolamaya Mikkel Damsgaard
August 4, 2021 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Germalka, Horyaalka Ingiriiska, Suuqa kala iibsiga 0
Kooxaha Premier League ee kala ah Liverpool , Tottenham Hotspur , Aston Villa iyo Leeds United ayaa dhamaantood xiiseynaya saxiixa xidiga Sampdoria eeMikkel Damsgaard.
21 jirka qadka dhexe ayaa si weyn uga dhex muuqday Denmark Euro 2020, isagoo dhaliyay labo gool shan kulan oo uu saftay, oo ay ku jirto laad xor ah oo cajiib ah oo uu ka dhaliyay England semi-finalka.
Sida laga soo xigtay Sportmediaset , afarta kooxood ee heerka sare ee Ingiriiska iyo sidoo kale Barcelona iyo Juventus ayaa dhammaantood muujiyey xiisaha ay u qabaan Damsgaard.
Sampdoria ayaa ka warqabta xiisaha ciyaaryahanka qadka dhexe waxayna diyaar u tahay inay aqbasho dalab kasta oo 30 milyan oo ginni.
Kooxda Talyaaniga ayaa kaliya Damsgaard kala soo saxiixatay kooxda reer Denmark FC Nordsjaelland bishii Luulyo 2020 lacag dhan £ 5.7m, laakiin iibintiisa xagaagan ayaa gacan ka geysan karta kor u qaadida miisaaniyaddooda suuqa kala iibsiga.
Damsgaard, oo saddex sano uga harsan tahay qandaraaskiisa, ayaa saftay 35 kulan oo Serie A ah xilli ciyaareedkii hore, isagoo dhaliyay labo gool afar kalena caawiye ka noqday.